Ọkachamara Semalt: Okwu Nchebe Nke Onye Ọ bụla Kwesịrị Ịma
Ọtụtụ azụmahịa na usoro ụlọ ọrụ na-aga n'Ịntanet. N'ihi ya, onlineubi aghọwo ihe kachasị mma maka ndị omempụ cyber iji mebie ọgụ ha. Ọtụtụ ndị ọchụnta ego na onye nwe ụlọ na ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa adịghịnwere ihe omuma zuru ezu na nkà iji wulite ma jiri ha na ebe obibi ha. N'ihi ya, ha na-ahọrọ ụzọ ndị dịka N'onwe Gị ọrụ na nhazi nhazidị ka HostGator. Imirikiti usoro nchịkwa ọdịnaya, nke ha na-adabere na ha gụnyere WordPress usoro ikpo okwu. WordPress na-akwado ruo 24% niileweebụsaịtị zuru ụwa ọnụ. Ọnọdụ a pụtara na ndị ọgba ọsọ nwere nnukwu egwu egwu izute ndị iro ha. Ịchọta usoro usoro-mbanye anataghị ikikebụ mgbe nrọ.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye ihe kpatara ndị mmadụ ji ahọrọ WordPress. Nke mbụ, ha nwere isi ihe na-emeghe ma nweta ọtụtụ plugins, nkenwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa. N'ihi ya, WordPress bụ usoro nlekọta njikwa ọdịnaya, nke na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịnweta ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ.Otú ọ dị, WordPress nwere nkwarụ. Dị ka e nwere ọtụtụ ndị na-eke weebụsaịtị na WordPress, ọtụtụ n'ime hacker si lekwasịrị anyaSaịtị WordPress. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-achọgharị ihe na-achọpụta oghere na nchekwa nke WordPress, ma ọ bụ na ngwa mgbakwunye maka WordPress,ha nwere ike ịmepụta ọtụtụ mwakpo ngwa ngwa, nke nwere ike iziga ozi onye ọrụ ma ọ bụ ozi ndị ọzọ bara uru na ebe nzuzo.
Nchedo site na spam
Ndị Spammers bụ ndị na-anwa ịmanye ndị a metụtara iji rụọ ọrụ ụfọdụ,ma ebumnuche n'azụ nzuzo ahụ adịghị mma. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ spammers nwere ike ịnwa ịghọgbu ndị mmadụ n'ịpị njikọ njikọ ọrịa. Na ndị ọzọoge, ha nwere ike inwe akwukwo ozo, nke na-enye ha nza otutu ihe bara uru. N'ọgbọ nke oge a, ndị spammers na-eji mgbakwụnye, nke nweremalware dị ka Trojans. Ikwesiri ime ka ndi ahia gi mara ihe ndi a. Ndị na-agba ọsọ na-akpata ihe mgbochi spam nile. Ha nwere ikechoro nzere onye ọrụ, ozi kaadị akwụmụgwọ, njikwa ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ihe ọzọ ruru unyi n'azụ mwakpo ha. Ịrụ ọrụ nchekwan'ihi na saịtị gị nwere ike ịzọpụta ya na ọtụtụ mwakpo.
Ndị na-awakpo mmadụ, bọtịnụ, na botnets
Mgbe ị na-agbagha ọgụ ọgụ, ọ dị mkpa ịchọta onye ma ọ bụ ihe ọ bụn'azụ agha ahụ. Ndị na-awakpo mmadụ bụ ndị dị adị na-arụ ọrụ na ihe mgbaru ọsọ ha n'uche. Bots bụ ngwanrọ dị mfe dịka ígwè ọrụ igwe,nke na-anọchite anya onye na-arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, botnet bụ netwọk nke ọtụtụ bọtịnụ, dị ka nde mmadụ, nke a pụrụ izigaiji mee ihe dị iche iche na-emepụta ma nye nsonaazụ ya na otu ebe.
Nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ gị yana nke ndị ahịa gị na-adabereobi siri gi ike dika oru. Mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị, anyị na-eleghara mpụ ndị nwere ike ịme nchọgharị na cyber, nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ e-commerce jupụtaala. Ọtụtụ mgbalị SEO ga-efu n'aka ndị omempụ na-enyere ndị asọmpi aka site n'ịkwalite asọmpi na-ezighị ezi. Ọnọdụ ahụ na-aka njọna weebụsaịtị WordPress, tumadi n'ihi na ha mara ha nche nchekwa. Ọzọkwa, WordPress nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke saịtị. Ụfọdụusoro, nke nwere ike ichebe onwe gị na WordPress nọ na ntụziaka a. Ị nwekwara ike hụ nchebe nke okporo ụzọ, ndị nletadika ime ka SEO di na Google site na nchedo nche Source .